साहनाको राजनीतिक जीवन
[2014-09-24 오전 9:21:00]
नेपालकी वामनेतृ सहाना प्रधानको जन्म काठमाडौंको असनमा बुबा शंकरलाल प्रधान र आमा रम्भा प्रधानको कोखबाट वि.सं. १९८४ साल असार २७ गते शुक्रबार भएको हो । उहा दुई वर्षको हुादा नै मातृस्नेहबाट बञ्चित हुनुभएको थियो । त्यसको दुई वर्ष नबित्दै उहा हजुरआमा र बाबाका साथ बर्मा पुग्नुभयो । सात कक्षाको अध्ययन पूरा गरी वि.सं. २००० सालमा काठमाडौ फर्कनुभयो ।
२००४ साल वैशाख १७ गते नेपालमा पहिलोपटक संगठित रुपमा राणाशाही विरोधी नारा लगाउने चार कर्मठ महिला कार्यकर्तामध्ये साहाना प्रधान पनि एक हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहा गिरफ्तार हुनुभयो । १५ दिन आमरण अनसनपछि महिलालाई शिक्षा दिलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरबाट आश्वासन पाएपछि उहा घर फर्कुनुभयो ।२००४ सालमा एस्.एल्.सी. उत्तीर्ण गरी २००५मा भाइ शंकर प्रधानसगै लखनऊको इजावेल धोवन कलेज पुग्नुभएकी सहाना आई. एस्सी. पूरा नगरी आई.ए. सक्नुभयो । २००७ सालमा नेपाल फर्केर तीनवटा स्कूल कन्यामन्दिर, शान्तिनिकुञ्ज र सीताराम हाइस्कूलमा पढाउनुभयो ।
उहा महिला संघको महासचिव हुनुभयो । २००८ सालमा जिल्ला कमिटी र २००९ सालमा अञ्चल कमिटीको जिम्मेवारी लिादै उहाले भक्तपुर र पाटनको एकसाथ नेतृत्व गर्नुभयो । २००९ सालमा भारतको पटना बोर्डअन्तर्गत नेपालबाट बी.ए.को ७२ जना परीक्षार्थीमध्ये उहा एकमात्र महिला हुनुहुन्थ्यो । सोही वर्ष उहाको विवाह पुष्पलाल श्रेष्ठसग भयो । पुष्पलाल राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएकाले २०१३ सालपछि पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्यो ।
२०१७–२०३५ सालको बीचमा उहाको राजनीति प्राय: मृत अवस्थामा रह्यो । २०३५ साउन ७ (सन् १९७८ जुलाई) मा पुष्पलालको निधनपश्चात् पुष्पलाल समूहको नेतृत्व बलराम उपाध्यायले गर्दै उहा त्यसबखत पार्टी प्रवक्ता हुनुभयो । २०४३ चैत्र १४–१७ मा सहाना र मनमोहन समूहले संयुक्त सम्मेलन गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) गठन गर्दा उहाा पार्टीको सचिव हुनुभयो । २०४७ साल चैत्र २२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेकपा (माक्र्सवादी) एक भई नेकपा (एमाले)को निर्माण गरियो ।
उहा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा उद्योग र वाणिज्यमन्त्री, २०४८ र २०५१ को संसद्को निर्वाचनमा क्रमश: काठमाडौ क्षेत्र नं. ४ र ६ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभयो । त्यसअघिको नेकपा (एमाले)–राप्रपा–सदभावनाको मन्त्रीपरिषद्मा उहा महिला तथा समाजकल्याणमन्त्री रहनुभएको थियो ।
जनआन्दोलन २०४६ मा वाममोर्चा अध्यक्ष हुनुभयो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि उहा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उहा परराष्ट्रमन्त्री बन्नु भयो । उहाको आत्मकथाको पुस्तक ‘‘स्मृतिका आाखीझ्यालबाट” प्रकाशित छ ।